Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato volcano-ka Kilauea | Saadaasha Shabakadda
Fulkaano Kilauea Waa mid ka mid ah 5ka volcano ee ka kooban jasiiradda Hawaii. Waxaa adduunka looga yaqaan inuu yahay midka ugu firfircoon meeraha. Magaceedu wuxuu ka yimid luqadda Hawaiian oo macnaheedu yahay "wax tuurid" ama "tufid." Magacani waxaa ugu wacan xaqiiqda ah inay ka mid tahay fulkaanaha oo ceyrinaya dhagaxa iyo gaaska ugu badan noloshiisa.
Qoraalkan waxaan ku sameyn doonnaa daraasad qoto dheer oo ku saabsan astaamaha fulkaanaha iyo nooca qaraxyada ee dhacay maalmihii la soo dhaafay. Ma dooneysaa inaad wax walba ka ogaato fulkaanahaan caanka ah?
1 Astaamaha Fulkaano ee Kilauea
3 Qaraxyada Kilauea
4 Qaraxyada hadda socda
Astaamaha Fulkaano ee Kilauea
Waa volcano ay iska leedahay kooxda fulkaano gaashaan. Badanaa waxay ka kooban tahay gebi ahaanba dheecaan aad u dheecaan badan. Dhexroorkeeda ayaa ka weyn dhererkiisa. Gaar ahaan, waxay cabireysaa 1222 mitir waxayna leedahay kaldera halka ugu sarreysa oo dhererkiisu yahay 165 mitir iyo ballac shan ah.
Waxay ku taal koonfurta-bari ee jasiiradda Hawaii waxayna aad ula mid tahay volcano u dhow oo la yiraahdo Mauna Loa. Sannado badan saynisyahannadu waxay u maleynayeen in Kilauea uu ahaa qaab ku lifaaqan Mauna Loa. Si kastaba ha noqotee, daraasado horumarsan oo aad u sareeya waxay awoodeen inay ogaadaan inay leedahay qolkeeda magma u gaar ah oo ku fidsan in ka badan 60 kilomitir qoto dheer. Fulkaanahaan kuma xirna wax kale oo ay ku fuliso howlaheeda.
Shirka gudahiisa qolka magma waxaa ku yaal godad yar oo wareeg ah oo qiyaastii ah 85 mitir. Waxaa loo yaqaan magaca Halemaʻumaʻu. Tani waxay ka dhigan tahay inay tahay mid ka mid ah xarumaha ugu firfircoon dhaqdhaqaaqa volcano ee dhismaha oo dhan. Jiirada volcano ma aha mid aad u kacsan oo waxaad dhihi kartaa dusha sare gebi ahaanba waa siman yahay.
Sababta ay u tahay mid ka mid ah fulkaanaha ugu firfircoon jasiiradda Hawaii oo dhan ayaa ah maxaa yeelay isagu waa kan ugu yar. Fulkaanaha waxay yareeyaan waxqabadkooda sanadihii la soo dhaafay. Dhammaan jasiiradaha ka kooban Hawaii waxay ku yaalliin meel kulul oo ku taal Badweynta Baasifigga. Waxa iyaga ka dhigaya kuwo gaar ah ayaa ah in volcanoonadan aysan ka sameysneyn xuduudaha teknoolojiyadda, si ka duwan kuwa kale oo badan.
Fulkaanaha Kilauea wuxuu ka yimid sida soo socota. Magmada ku jirta dhulka dhexdiisa ayaa si tartiib tartiib ah kor ugu kacday dusha meesha barta kulul ku taal. Waqtigaas, iyada oo ay le'eg tahay tirada gubatay, qolofka dhulka ayaa u adkeysan waayey cadaadiska wuuna kala jabay. Jabkani wuxuu sababay in magma ay kor u kacdo oo ay ku faafto meel walba.
Guud ahaan, dhammaan volcanoes-ka ay leeyihiin kooxda gaashaammadu waa natiijada ka soo baxda isdaba-joogga ah ee dheecaanka aad u dheecaanka badan. Qaab-dhismeedkan laguma sameyn doono bilo gudahood, laakiin malaayiin sano waa inay ka soo gudubtaa tan.
Fulkaanahaan, bilowgiisii, wuxuu ku hoos jiray badda. Kadib soo ururinta magma, waxay dusha sare ka kacday qiyaastii 100.000 oo sano ka hor. Tani waa da 'yar oo da' yar oo fulkaano ah. Caldera waxay bilaabatay inay sameysmo heerar kala duwan 1500 bilyan sano ka hor. Sidaa darteed, waxqabadkoodu waa qoto dheer yahay. 90% dusha sare ee kaldera waxay ka kooban tahay qulqulo qulqulaya oo ka yar 1100 sano jir. Dhanka kale, 70% dusha sare ee fulkaanaha wuxuu kayaryahay 600 sano. Da'daani aad ayey ugu yar yihiin volcano. Waxaad dhihi kartaa weli waa cunug.
Nooca ugu caansan ee aan ka heli karno Kilauea waa basalt iyo picrobasalt.
Sidii hore loo soo sheegay, waa mid ka mid ah fulkaanaha ugu firfircoon meeraha waana firfircoonaa tan iyo markii ugu horreysay ee uu qarxay qarax. Waxay dhacday qiyaastii sanadka 1750. Hawlaheeda fulkaanaha badankood waxay udhaxeeyeen sanadihii 1750 iyo 1924. Sikastaba, howshani way kayartahay tii kadambeysay. Waxay u egtahay in volcano ay hadda bilaabeyso matooro. Sanadkii 1924 waxay yeelatay qarax qarax ilaa 1955-kii ayay yeelatay qaraxyo gaagaaban.
Qarxa hadda ee fulkaanaha Kilauea waxaa lagu magacaabaa Pu'u O'o waxayna bilaabatay 30 sano ka hor. Waxay bilaabatay Janaayo 3, 1983. Waxaa lagu aqoonsaday muuqaalka lava dhalaalay oo ah dillaac dhererkiisu yahay 7-kilomitir. Markii sanadihii la soo dhaafay, waxaa soo baxayay qaar ka mid ah laamaha lafaha si isdaba joog ah laakiin aamusnaan ah.
Qaraxyada hadda socda
Bishan Maajo 2018, volcano-ka Kilauea wuxuu bilaabay qarax lava ah waxay sababtay dhulgariir baaxad weyn ilaa 6,9 iyo 5,7. Lacagta faraha badan ee la soo saaray, horumarinteeda iyo furitaanka meerisyo waaweyn ayaa ku qasbay ciidamada amniga in ay qaadaan daadgureyn. 1700 qof ayaa laga kaxeeyey guryahooda.
Dhagaxa ayaa burburiyey ilaa 35 dhisme. Magaalooyinka sida aadka ah ay u saameysay waxaan ka helnaa Leilani Estates iyo Lanipuna Gardens, halkaasoo lawaabku daboolay guryaha, jidadka oo bilaabay dabab yaryar. Khatarta volcano ma aha oo kaliya laafiga, laakiin gaasaska la sii daayo. Gaasas taxane ah ayaa si isdaba joog ah looga sii daayaa dillaacyada dhaawaca caafimaadka aadanaha. Gaasaska soo baxa waxaa ka mid ah baaruud dioxide, oo ah sun xoog badan.
Khubaradu waxay ku andacoonayaan in halista dhabta ah ee ka dhex aloosan khilaafka ay dadkani isku helaan Ma aha cayrinta laafku, laakiin gaasaska la soo saaray. Waxaa jira aag aad u weyn oo jabka ah oo ku yaal crack bariga, waa aag daciifnimo. Magmadu waxay bilawday inay u haajirto una dhaqaaqdo dhankaas. Xaqiiqdii, wabiga harooyinka dillaaca ayaa hoos udhacay in kabadan 100 mitir maalmo gudahood.
Lava sidoo kale waxay leedahay khataro qaarkood, maadaama ay qarxdo dhowr jeer. Si kastaba ha noqotee, dadku waxay si fudud uga carari karaan qulqulka qulqulka illaa inta ayan ku xannibnayn. Kusoo dhowaanshaha wuxuu noqon karaa mid qatar ah qiiqa gaaska awgiis.
Sawir gacmeedkan waxaad ku arki doontaa waxyeelada uu geystay volcano-ka Kilauea:
Lakabka is dulsaaran
Lava ayaa dabka galiya kaynta
Gudaha qolka magma
Sawirka anteenada ee qaraxa
1700 qof ayaa laga daad gureeyay
Fiidiyowgaan waxaad adigu ku arki kartaa naftaada sida uu shaashadu u socoto:
Sida aad u aragto, Kilauea, oo ah mid ka mid ah fulkaanaha ugu firfircoon adduunka, ayaa mar kale taariikh ka dhigaya nolosha muwaadiniinta Hawaii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato volcano-ka Kilauea